Textile Lamination Manufacturers na Suppliers - China Textile Lamination Factory
PA na-agbaze nchara nrapado film bụ a na-ekpo ọkụ gbazee nrapado film ngwaahịa mere nke polyamide dị ka isi akụrụngwa. Polyamide (PA) bụ polymer thermoplastic polymer nwere usoro nhazi nke otu amide na akwara akwara nke sitere na carboxylic acid na amines meputara. Atọm hydrogen a na atọ ...
PA gbazee nrapado web nkiri
Nke a bụ ihe polyamide omentum, nke kachasị maka ndị ọrụ dị elu. Akụkụ ndị bụ isi nke ngwaahịa a bụ ụfọdụ uwe akwa, ihe akpụkpọ ụkwụ, akwa na-enweghị akwa na akwa mejupụtara. Akụkụ bụ isi nke ngwaahịa a bụ ikuku ikuku dị mma. Ngwaahịa a bụ g ...